ဆောင်းဦးနှင့်ဆောင်းရာသီ Tinker အဘို့ကြီးသောမီးအိမ် | ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်အခမဲ့အရောင်စာမျက်နှာများ
အာရေဗျ Nights ထဲကနေမီးအိမ်
အိမ်လုပ်မီးအိမ် သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အထူးကျက်သရေရှိသည်။ နွေရာသီမှာတော့သူတို့ကျန်ကြွင်းသောအရပ်ပေါ်မှာ balmy အိမ်နီးချင်းအတွက် shimmer, ကျဆုံးခြင်းနှင့်အချိန်သည်ဆောင်းကာလ၌, သူတို့အဘယ်သူမျှမလေတိုက်လည်းမရှိလျှင်ပင်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေအိမ်တစ်ခုသို့မဟုတ်ပွဲသို့စားပွဲပေါ်မှာအလှဆင်။
သင်တန်းကိုတွေ့မြင် အိမ်လုပ်မီးအိမ် တံခါးနားမှာတစ်အလှဆင်အဖြစ်ဆောင်းဦးနှင့်ဆောင်းရာသီတွင်ဥပမာ, အကြီးအဝင်ဝမှာ။ အကောင်းဆုံးအရာကလွယ်ကူတဦးတည်းဖြစ်ပါတယ် လေတိုက်အလင်းသူ့ဟာသူလုပ်ကလေးများကဝမ်းမြောက်အများကြီးရှိသည်နှင့်အများကြီးကြိုတင်အသိပညာမပါဘဲအထင်ကြီးရလဒ်များကိုအောင်မြင်ရန်ကြောင်းဒါ။ ကြောင်းလှုံ့ဆျောမှုမပါလျှင် ...
တစ်ဘို့ selfmade ဆောင်းဦးရာသီလေတိုက်အလင်း သင်ဖယောင်းတိုင်အဘို့ကိုသာတစ်ချိန်ကသင့်လျော်သောဖန်လိုအပ်ပါတယ်။ ကပိုကြီးတဲ့လေတိုက်အလင်းဖြစ်သင့်တယ်, သင်ဖန်အိုးကိုသုံးနိုင်သည်။ အဆိုပါသင်တန်း, ကွဲပြားခြားနားသောအရွယ်အစားအတွက်ရှိပါသည်။ တစ်ဦးကယိုအိုးကောင်းသောန်ဆောင်မှုများပေးနိုင်ပါသည်။
nice သည့်အခါမျှမတစ်ခုတည်းကအစဉ်အဆက်လုပ်ကြည့် selfmade မီးအိမ် အလှဆင်ပေမယ့်စားပွဲပေါ်ဒါမှမဟုတ်ပြတင်းပေါ်အတူတူပင်အမျိုးမျိုးအနည်းဆုံးသုံးစုံကိုအသုံးပြုသည်။
တစ်ချိန်ကအနည်းငယ်ပိုထူမှတ်တိုင်ဖယောင်းတိုင် - ဖယောင်းတိုင်လက်ဖက်ရည်အလင်းအိမ်အဖြစ်သင့်လျော်သည်သို့မဟုတ် - ဖန်ခွက်အရွယ်အစားပေါ် မူတည်. ။
ကဆြုံးဖန်ဘို့သင့်ကိုမေပယ် & Co ၏ရောင်စုံအရွက်လိုအပ်ပါတယ် ဒါကရက်အနည်းငယ်မတိုင်မီအခြောက်လှန်းထားရမည်။ ရိုးရှင်းတဲ့ကြိုးနှင့်အတူဖန်ကအလှဆင်ချည်နှောင်မှဆက်သွယ်နိုင်သည်။ သို့သော်သတိပြုရကြမည်: ခြောက်သွေ့ရွက်ဖယောင်းတိုင်မီးလျှံတွေနဲ့အဆက်အသွယ်ထဲသို့မဝငျနိုငျကွောငျးသေချာပါစေ။
ဤနည်းအားဖြင့်၏သင်တန်းကိုသင်ဖန်အပေါ်ကိုအခြားရာသီ immortalize နိုင်ပါတယ်။ ဆောင်းတွင်းအတွက်ဆောက်လုပ်ရေးစက္ကူကနေနွေဦးနှင့်နွေကာလ၌ရွက်ခြောက်များနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်စတား။ အဆိုပါကောင်းသောအရာထိုကဲ့သို့သောသောကွောငျ့ဖွစျသညျ selfmade မီးအိမ် နီးပါးတဦးတည်းပိုက်ဆံကုန်ကျ!
ဤတွင်လွန်း, သင်တန်း, သငျသညျဖယောင်းတိုင်နှင့်အဖန်လိုအပ်ပါတယ်။ ထို့အပွငျ, သင်မူကားပင်ဝေါလ်ပေပါငါးပိနှင့် tracing စက္ကူလိုအပ်ပါတယ်။ ထို့နောက်တစ်ဦးခရစ္စမတ်လင်ပန်းပေါ်ဥပမာအုပ်စုများအတွက် draped သောဝေါလ်ပေပါငါးပိနည်းလမ်းအတွက်ကောင်းတဲ့၏သေးငယ်တဲ့ဖန်ခွက်ကိုကြည့်။
အဆိုပါများအတွက် tracing စက္ကူထံမှများမှာ အိမ်လုပ်မီးအိမ် ဖြတ်နှင်းခဲပန်းပွင့်ကြယ်ပွသို့မဟုတ်ထင်းရူးသစ်သားကြိုက်တယ် Wintermotive ။ ဤရွေ့ကားထို့နောက်သီးခြားစီသို့မဟုတ်ထပ် (သင်, ဥပမာ, သာကြယ်ပွသို့မဟုတ်ရုံ Eisblumen ဖြတ်တောက်မှုလျှင်ကောင်းတဲ့) လျှက်ရှိကြောင်းဖန်ခွက်ပေါ်ဝေါလ်ပေပါငါးပိနှင့်အတူဖြစ်ကြသည်။
အလွန်ငယ်ရွယ်ကလေးများရိုးရိုးစက္ကူ strips တွေသို့မဟုတ်-bits ကိုက်ဖြတ်နိုင်ပါတယ်။ ဤတွင်, ဖြစ်ကောင်းယခင်ကခရစ္စမတ်ကိုက်ညီမယ့်အရောင်သတ်မှတ်။ Multi-အရောင်ဖြစ်လည်းမရှိလျှင်, ရုံ All-ရာသီကားပေါ်မှာပဲ!
အဘယ်သူသည်ဖန်မီးအိမ်ဖြစ်စေချင်ပါဘူး, အစခေပျြမြားစက္ကူနှင့်အတူအလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ သို့သော်ဤနေဆဲအလွန်ငယ်ရွယ်ကလေးတွေနဲ့အတူနည်းနည်းများလွန်းခက်ခဲသည်။ ဒီနေရာတွင်တစ်ခု Coaster, ရောင်စုံ Tonpapierstreifen, ခေပျြမြားစက္ကူနှင့် rinestone စသည်တို့ဖြစ်ကြပါသည်လိုအပ်ပါတယ်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, ဟုတ်ပါတယ်, ကတ်ကြေး, ကော်နှင့်လက်ဖက်ရည်အလင်းအိမ်၏။
ကျဆုံးခြင်းအတွက်မုန့်ဖုတ် - ဖုတ်ပန်းသီးနှင့်ရွှေဖရုံသီး muffins
ဆောင်းရာသီအတွက် Dogs ကို | အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ
အရောင်ဆောင်းရာသီ snowball ရန်ပွဲ
ဆောငျးရာသီငှက်လမ်းခွဲအတွက် Coloring သောငှက်များ
Birdhouse ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတညျဆောကျ | ကလေးတွေနဲ့အတူ Tinkering
နွေရာသီ Tags: Insert | လက်မှုပညာဆင်နွှဲ
မြည် Tinker သူ့ဟာသူ Lantern | Sankt မာတင်
သဘာဝကပစ္စည်းများ - ကလေးတွေနဲ့အတူ Tinker
ကလေးတွေနဲ့အတူပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေ - ဆားမုန့်စိမ်း
ကလေးတွေနဲ့အတူပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေ - ဘဝ၏သစ်ပင်